ဘယ်လိုပုံသွင်းကြမလဲ.. | မိုးသကျဦးလှငျ
Home » အတွေးစများ » ဘယ်လိုပုံသွင်းကြမလဲ..
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကလူမှန်းသိတတ်စအရွယ်ကပေါ့ဗျာ။အမေကသူများအသတ်ကိုမသတ်ရဘူး၊ သူများပစ္စည်းကိုပိုင်ရှင်မသိပဲမယူရဘူး၊ သူများ အိမ်ယာ မပြစ်မှားရဘူး၊ သေရည်သေရက်ကို မသောက်သုံး ရ
ဘူး ၊ လိမ်မပြောရဘူး ၊ အစရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့အခြေခံ ငါးပါးသီလကို စသင်ပါတယ်.။ ကျွန်တော်မှ ထူးခြားပြီး
သင်တာ မဟုတ်ပဲ. မြန်မာလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးကလည်း ဒီလိုပဲဆိုတာ.မေးစရာမလိုတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခု
ပဲဖြစ်ပါတယ်.။ ခပ်ငယ်ငယ်က ငရဲဆိုတာကိုအင်မတန်ကြောက်တယ်..။ ရုပ်ပြစာစောင်တွေ ၊ဗုဒ္ဓစာပန်းချီတွေ ထဲမှာလည်း ငရဲကျတဲ့ပုံတွေပါလာရင်.. သိပ်ကိုကြောက်တယ်.။ ငယ်ငယ်တုန်းကတည်းက မကောင်းမှုကိုရှောင် ရှားဖြစ်ခဲ့တယ်.။ငယ်ငယ်က မမေးဖူးပေမယ့် မေးခဲ့ရင် ဖြေခဲ့မယ့် စကားတစ်ခွန်းရှိပါတယ်.။ ဘာဖြစ်လို့မကောင်း မှုကို မလုပ်တာလဲ လို့ မေးရင်. ငရဲကြီးမှာ ကြောက်လို့ မလုပ်တာပါလို့ ဖြေမယ်ထင်တယ်. ။
နဲနဲအသက်ကြီးလာတော့.စာတွေပိုဖတ်ဖြစ်လာတယ်…။ အသိဥာဏ်လည်းနည်းနည်းပိုရှိလာတယ်.။အ ကောင်းနဲ့ အဆိုးဆိုတာကို ခွဲခြားသိလာပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထင်မိပါတယ်.။ အဲဒီအချိန်မှာ ခုနက မေးခွန်းကိုဖြေ မယ့်အဖြေပြောင်းသွားတယ်.။ မကောင်းမှုကို ဘာကြောင့်မလုပ်တာလဲ.. ။ မကောင်းမှန်းသိလို့ မလုပ်တာပါ.လို့ ပေါ့.။ သေချာရဲ့လား ပြန်မေးတယ်.။ သေချာပါတယ်.။ မကောင်းမှန်းသိလို့ မလုပ်တာပါ.။ ဥပမာ.. အရက်ဘာ လို့မသောက်တာလဲ.။ ငရဲကို ခနထားပြီး ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ ကနေကြည့်ရအောင်.၊ အသည်းပျက်စီးမှာစိုးလို့ဘာ ညာ ပြောမှာပေါ့.။ ဒါဆို အသည်းရောဂါ မဖြစ်တဲ့အရက် ပေါ်လာရင်သောက်မယ့်သဘောရှိတယ်.။ ဒါဆို မိန်းမ ကိစ္စ ဘာဖြစ်လို့ ရှောင်ရှားရသလဲ မေးပြန်ရင်လည်း.. အဲဒီလိုပါပဲ.။ လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါတွေ ဖြစ်မှာစိုးလို့ပေါ့. ၊လို့ထပ်ဖြေဖို့ မဟုတ်တော့ပါဘူး.။ တကယ်တမ်း ငါးပါးသီလ လုံခြုံမှုမှာချွင်းချက်မရှိပါဘူး၊ အဲ ဒီရောဂါတွေ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး ၊ ဒါမှမဟုတ်.၊ အဲဒါတွေလုပ်လို့ ငရဲမကြီးဘူးဆိုရင်တောင် မကောင်းမှန်း သိလို့ ရှောင်ရှားတာပါတဲ့..။ ဒါဟာ ချွင်းချက်မရှိတဲ့သီလစင်ကြယ်မှုပါပဲ..။
တစ်ချို့ကလေးလေးတွေမြင်ဖူးတယ်.။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဆဲရေးတိုင်းထွာကြတယ်.။ တစ်ချို့မိဘ တွေက သဘောကျကြတယ်.။ လူမဖြစ်သေးတဲ့ လူပေါက်စလေးက.မပီကလာပီကလာနဲ့ ဆဲတာကိုး.။ တစ် ချို့ က ကိုယ်တိုင်တောင်သင်ပေးလိုက်သေးတယ်.။အဲဒီကလေး ကြီးလာတော့ အင်မတန်မိုက်ရိုင်းတဲ့သူဖြစ်လာ တယ်.။ ကလေး ငယ်ငယ်အရွယ်လေးနဲ့ မတူတော့တဲ့အချိန်မှ မိဘကဒါကို သတိ မထားမိတော့ဘူး .။ဒါပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်က သိလာပြီလေ.။ သူမိုက်ရိုင်းတယ်ဆိုတာကိုပေါ့.။ တကယ်တမ်း လူတစ်ယောက် ကြီးပြင်းလာရာ အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ ပုံစံ အနေအထားက အဲဒီလူအပေါ်မှာ အများကြီးသက်ရောက်ပါတယ်.။ အထူးသဖြင့်အမေ လုပ်တဲ့သူ ဟာ ဘာသာတရားအခြေခံရှိတဲ့သူ.။ သားသမီးကိုလိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်သွန်သင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ငယ်ငယ် လေး လူဖြစ်လာခါစ ကလေးငယ်ဘ၀ဟာ မိခင်နဲ့အနေများခဲ့လို့ပါ.။ဘာသာတ ရားအသိလေးကို ငယ်ငယ်လေးကတည်းကရိုက်သွင်းခံထားရတဲ့ ကလေးဟာ ဘယ်နေရာမှာပဲနေနေ ဘယ်သူ နဲ့ပဲ ပေါင်းပေါင်း မပျက်စီးပါဘူးတဲ့.။ ဒါပေမယ့်ကိုယ့် စိတ်ဓါတ်ကို ခိုင်ကျည်စေမယ့်.။ ကိုယ့်ရိုးသားမှုကိုယုံကြည် မှုရှိစေမယ့် အသိဥာဏ်ကြွယ်ဝမှုကိုတော့ ရှိထားဖို့လိုပါသတဲ့.။အဲဒီအတွက်စာကိုဖတ်ဖို့ လိုတယ်.။ စာဖတ်ဖို့ အတွက်လည်း စာကိုချစ်တတ်ဖို့လိုတယ်.။စာပေကိုမြတ်နိုးတဲ့ကလေးကိုလည်း စာကောင်းပေမွန်တွေဖတ်တတ် အောင်လမ်းညွှန်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်တဲ့..။ မော်စကိုမှာတစ်ခုကိုသတိထားမိတာရှိပါတယ်.။ ရုရှားလူမျိုး တွေဟာ အင်မတန်စာဖတ်ကြတဲ့လူမျိုးတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပါ.။မြေအောက်ရထားစီးတဲ့အခါ လူ၁၀ ယောက် မှာ ခြောက်ယောက်လောက်က.. Handbook ဒါမှမဟုတ်.Ebook Reader တစ်ခုခုနဲ့ စာဖတ်နေကြတဲ့သူတွေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်.။ တစ်ဦးချင်းရဲ့ အသိဥာဏ် ကိုယ်ပိုင်ဗဟုသုတကျတော့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ နဲ့ အင်မတန်ကွာသွားပါတယ်.။နိုင်ငံတိုင်းလူမျိုးတိုင်းမှာ . ထက်မြက်သူ နဲ့လူပြိန်းတွေ ရာခိုင်နှုန်းမတူရှိကြတဲ့အ နက်.ဒီလို စာဖတ်ဝါသနာတွေက ရာခိုင်နှုန်းကွာခြားသွားစေတဲ့အဓိက အချက်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ထင် မိပါ တယ်.။ နောက်ပြီး မှတ်သားစရာကောင်းတာတစ်ခုက သူတို့လူမျိုးတွေရဲ့အားလပ်ချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့လို ကိုရီး ယားကားကြည့်တာမျိုး..။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာလေကန်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့.. Chess ထိုးတာတို့..။ Sudoku က စားတာမျိုး တွေကိုပိုပြီးဝါသနာထုံလေ့ရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ.။
ဘယ်နေရာမှာမဆို အတုယူစရာရှိရင်ယူရမှာပါ.။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေ ကိုဘယ်လိုမြှင့်တင်ကြမလဲ.။ လိမ္မာယဉ်ကျေးသူတွေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ.။ ထူးချွန်ထက်မြက်သူတွေ တတ်သိနားလည်လွယ်သူတွေ .၊ ခေတ်နဲ့အမီ မျက်ခြေမပြတ်သူတွေဖြစ်အောင်ဘယ်လို လေ့ကျင့်ကြမလဲ..။ တစ်ခုသတိပြုစရာရှိတာက..ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုတွေများပြားလာတာနဲ့ အမျှ.စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုတ်ယုတ် လာတာကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ကြမလဲ.။တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်းရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ကိုယ့် သားသမီးတွေ မထိခိုက်အောင်.ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ဆိုတာသိပ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်.။ကျွန်တော်အထက်က ပြောခဲ့သလို ဘာသာတရားဆိုတာ အကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းဖို့အသင့်တော်ဆုံး ပါပဲ.။
ဂီတက ဘာဆိုင်လို့လဲ လို့မမေးပါနဲ့..။တကယ်တမ်းကပါရမီပါမှ လုပ်လို့ရမယ့် အနုပညာတွေထဲမှာဂီတ လည်းပါပါတယ်.။ဂစ်တာ တီးတဲ့ကိုနိုင်ဇော်ကပြောဖူးတယ်.။ ပန်းချီဆွဲချင်ရင် ၂ နှစ် ၊ ၃ နှစ်လောက် ကျင့်ရမယ် တဲ့.။ ဒါပေမယ့်. ဂီတကိုတော့ ၂ ဘ၀ ၊၃ ဘ၀ ကျင့်ရပါတယ်တဲ့..။ မှန်ပါတယ်.။ ကျွန်တော့်ဆီဂစ်တာတီးသင်ဖူး တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ၊ ညီလေးတွေ အစ်ကိုကြီးတွေရှိပါတယ်.။ ကျွန်တော်မသင်ခင် သူတို့ကို စည်းချက်ကို နား လည်တဲ့ ပါရမီပါလား တစ်ချက်အရင်ကြည့်ပါတယ်.။ လွယ်ပါတယ်.. သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို လက်ခုပ်စည်းချက်နဲ့ ဆို ခိုင်းလိုက်တာပါ.။ အဲဒါကိုမှ စည်းချက်ကျအောင် မဆိုတတ်ဘူးဆိုရင်.။ သေချာပြီ. အဲဒီလူ ဂစ်တာတီးတတ်ဖို့ မ ဖြစ်နိုင်တော့ဘူး..။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့. အဲဒီစည်းချက်ကိုနာခံနိုင်တဲ့ လိုက်နာနိုင်တဲ့ နားလည်နိုင်တဲ့ အသိ က ပါမလာပါဘူး.။ အဲဒီအသိက လုပ်ယူ ၊ ကျင့်ယူလို့မရတဲ့. ပါရမီ.(Talent)တစ်ခုဖြစ်လို့ပါ.။လူ ၁၀၀ မှာ ၃၀ လောက်က အဲဒီအသိမရှိကြပါဘူး.။ ကြိတ်မှိတ်သင်ကြတယ်.။ practice make perfect ဆိုသလိုပေါ့ဗျာ.။ ကြိတ်မှိတ် ကျင့်လို့.။ သီချင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်စေ. ။ ၂ပုဒ်ဖြစ်စေ ရသွားတတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်.။ ဒါပေမယ့် သူတို့ က စည်းချက်ကိုနားမလည်တဲ့အတွက်.သူတို့တီးတဲ့အခါ.၊ သူများက သူတီးတာကို လိုက်ဆိုရတာ သာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.။ သူများဆိုတာကို လိုက်တီးလို့မရပါဘူး.။အဲဒီမှာ ပညာရှင်တွေတွေ့ရှိကြတာက.စည်းချက်သ ဘောတရားကိုနားလည်တဲ့သူတွေက ဂီတကို တကယ်ခံစားနိုင်ပြီး.ကျန်တဲ့အလုပ်တွေကို လုပ်တဲ့နေရာမှာ တစ် ခြားပညာတွေကိုသင်ကြားရာမှာလည်း တတ်မြောက်လွယ်တယ်ဆိုတာကို တွေ့ရပါတယ်တဲ့.။ လူပြိန်းနဲ့ ထက် မြက်သူခွဲခြားတဲ့နေရာမှာ.ဂီတကလည်း တစ်မျိုးအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့.။ ဒီစာကိုဖတ်ပြီးတော့..ငါကတော့ဘာ တစ်ခု မှ မတီးတတ်ဘူး လို့ စိတ်ဓါတ်မကျသွားပါနဲ့နော်..။ တကယ်တမ်းက သီချင်းဆိုတတ်ရင်ကို စည်းချက်သ ဘောတရားကိုနားလည်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်.။ တစ်ချို့က သီချင်းကို စည်းဝါးကိုက်အောင်မဆိုတတ် သူတွေရှိပါသတဲ့.။ အ၀င်အထွက် ကို မှားတာ မျိုးပေါ့.။ ဂီတကိုခံစားတတ်သူတော်တော်များများကလည်း စိတ် ထားနူးညံ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့..။ စိတ်ထားနူးညံ့တဲ့.. သူတွေတော်တော်များများက. စိတ်တိုစရာ ဒေါသ ထွက်စရာကြုံရင် အလွယ်တကူ ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်တဲ့.။ တစ်ခုချွင်းချက်ရှိတာက.. သီချင်းကိုခံစားတတ်တဲ့သူ တွေ .၊ သီချင်းစာသားကို နားထောင်ပြီး သဘောကျတတ်တဲ့သူတွေ အသည်းကွဲတဲ့အခါ သီချင်း မဖွင့်မိပါစေနဲ့ တဲ့..။ စာသားတိုင်းဟာ ခံစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေပြီး. ဘူးလေးရာ ဖရုံဆင့်ဖြစ်တတ်လို့ပါတဲ့.။ ဒါကတော့ မဆိုင်ပဲ နဲ့ပြောလိုက်တာပါ.။ဂီတဟာလည်း ကလေးတွေကို စိတ်ထားပိုင်းဆိုင်ရာမှာပုံသွင်းရလွယ်ကူစေတဲ့ အရာတစ်ခု ပါပဲ.။
ကိုယ့်မျိုးဆက်သစ်တွေကို ထက်မြက်အောင်လုပ်ရုံနဲ့တော့ ပြီးမသွားပါဘူး.။ သူတို့ကိုစိတ်ထားနူးညံ့ အောင်.၊ လိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်လုပ်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ပြောချင်တာပါ.။ လူတော်ဖြစ်ဖို့ထက် လူကောင်းဖြစ်ဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်.။ မကောင်းတဲ့သူဆိုရင် တော်လေ အန္တရယ်ကြီးလေပါပဲ.။ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖို့.၊ မိမိကိုယ်ကျင့်သိက္ခာကို ဘယ်သူ့ကြောင့်မှ ဘယ်နည်းလမ်းနဲ့မှ အပျက်မခံတတ်တဲ့ သူမျိုးလေတွေဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးရမှာပါ.။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်လက်မခံနိုင်တာတစ်ခုရှိပါသေးတယ်.။ အပေါင်းအသင်းမှားလို့ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့ စကားကိုပါ.။ တကယ်တမ်းအပေါင်းအသင်းမှားလို့ ပျက်စီးတယ် ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်စိတ်ဓါတ်က ခိုင်မာမှုမရှိလို့ပါ.။ ငယ်စဉ်ကတည်းက သံမှိုလိုစွဲထားရမယ့် အသိတွေ အခြေမ ခိုင်လို့လို့ပဲယူဆပါတယ်.။ သူများတိုက်တွန်းလို့လုပ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင် အမှားအမှန်မခွဲခြားနိုင်သူတွေ လုပ်တာ မျိုးတွေလို့ယူဆမိပါတယ်.။
ကဲ. စာလည်းရှည်သွားပါပြီ..။ ကိုယ့်သားသမီးလေးတွေကို Talent ရှိတဲ့သူ.၊ လူချွန်လူကောင်းလေး တွေဖြစ်အောင် ဘယ်လိုပုံသွင်းကြမလဲဆိုတာ..မိဘဖြစ်လာမယ့်သူတိုင်း သိထားသင့်တယ်လို့ထင်မိပါတယ်.။
ရေးသားသူ : မိုးသက် // 9:19 AM
Posted by မိုးသက် at 9:19 AM Read more
Snow March 12, 2012 at 9:37 AM
ုဟုတ်ပါတယ်.. လူတော်လူကောင်း.လူလိမ္မာတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာ.. မိဘနဲ့.ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုပေါ်မှာလည်း အများကြီး.မူတည်ပါတယ်.
₭Ǿ2 March 12, 2012 at 9:47 AM
မြတ်ကြည် March 12, 2012 at 9:37 PM
လက်ဝဲ March 12, 2012 at 11:50 PM
သိပ် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ်လေးပါ...
Candy March 13, 2012 at 7:50 AM
Yes sir မောင်လေး
လူငယ်စကား လူကြီးကြားဆိုသလို မှတ်သွားတယ် အဟိ :P
mstint March 13, 2012 at 10:04 AM
ပါတယ်နော်း) စာအရေးအသားကာင်းတယ်။
jasmine(တောင်ကြီး) March 19, 2012 at 12:09 AM